Nei uchifanira kudzidza ballet kuti uve mutambi we ballet - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Kupfeka || Skirt
Munhu mukuru tutu
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Sei uchifanira kudzidza ballet kuti uve mutambi we ballet
Sei uchifanira kudzidza ballet kuti uve mutambi we ballet
Sezvinozivikanwa kune vese, ballet inzvimbo yepamusoro, yakakwana yekuita hunyanzvi, inovhara akasiyana maficha maficha anosanganisira kutamba, hunyanzvi, mumhanzi uye mutambo. Mushure memazana emakore ekuvandudza, ballet rave rairo ine yakaoma uye nesainzi yekudzidzisa system. .
Mwanasikana Asingavharirwe kumusoro
Nhau dzakanaka ndedzekuti nekuenderera mberi kukurumbira kweruzivo rwekutamba, vabereki vakawandisa vari kuda kudzidza ballet, ballet, rega mwana adzidze ballet, runako rwe ballet inodhakisa, asi vamwe vabereki ve ballet pachayo haina kunyatsonzwisisa, zvakare kusaziva vana mubhallet kukosha kwakamira kupi.
Mukuita kwekudzidzira ballet kare, vamwe vabereki vaiti, "Zvinotora nguva uye zvinonetsa kudzidzira ballet. Kana ichingova kirasi yekuratidzira kuita, vana vanogona kutamba uye zviri nyore. Nei uchinetseka kuita ballet yakakura?
Iko kufamba kwekutamba uye hunyanzvi hunoshandiswa nevadzidzi vezvikamu zvakasiyana zvakasanganiswa mune yekutanga classical ballet, iyo inoedza kugona uye ruzivo rwevatungamiriri, vanyori vezvinyorwa nevadzidzisi zvakanyanya. Zvinotora ingangoita hafu yegore yekugadzirira kubva mukudzidzira kusvika pakuita.
Uye zvigadzirwa, zvipfeko, nhanho Zvirongwa zvakare zvakaomarara uye zvakaomarara, saka yepakutanga yevana klassisiti ballet, chii chakakosha?
Ballet pamusoro pekutamba
Ballet fomu yehunyanzvi iri kumusoro kwepiramidhi yekutamba. Zviri mukati maro zvinoenderana nenyaya dzekare uye mimhanzi ine mukurumbira uye mumhanzi. Nemitambo yakawanda, choreography yakakwenenzverwa, marongero akati wandei, akawanda mabasa, akasarudzika magadzirirwo uye mwenje wakajeka, zvinogona kunzi ndiko kugona kukuru kwehunyanzvi hwekutamba.
Classic - mabviro e classical ballet
Musi waGumiguru 15, 1581, iyo Louvre muParis yakanyatsogadzira Bindu hombe reSyse, nenhare, matanda, matsime uye ngoro. Vateereri vakagara vakakomberedza mativi matatu kuti vaone mutambo uyu unonzi "The Queen's Comedy ballet".
Iyo Queen's Comic Ballet, yakavakirwa pane nyaya yaHomer's Odyssey, inozivikanwa nevamadokero vezvakaitika kare vekuEurope seimwe yemaballlet ekutanga pasi rose. Ine nhoroondo yeanopfuura makore mazana mana nemakumi matatu.
Zvakafanana neComedic Ballet yeMambokadzi, mabhallet enguva imwe chete ainyanya kuvakirwa mungano uye anozivikanwa pakati pevanokudzwa vedare.
Mambokadzi Comic Ballet
Uye vanyori verudo havasi kumira ipapo.
Kubva kuna vamwari uye magamba anozivikanwa eOlympus, kuenda kuvadiki vevanyori vemazuva ano, kune ngano dzenyika.
Chikamu chemumhanzi wakakurumbira - chakabatanidzwa ne ballet
Kukwidziridzwa kwaBallet pane zvese zvinoonekwa uye mimhanzi runako kwaizivikanwa muRussia muma1880, with classical ballets such as Sleeping Beauty, Iyo Nutcracker and Swan Lake performed by Petypa, Ivanov and Tchaikovsky.
Kana classical ballet ichisangana neti symphoni, pane iko nekukurumidza makemikari maitiro. Mimhanzi inoisa danho uye dhanzi rinotsanangura mimhanzi. Izvo zviviri zvakanyatsobatanidzwa kuita chimwe.
Yapfuura:Vacheche vanogona sei kudzidza ballet
Tevere:Zvakanakira uye kufunga kubva kuvasikana vanotamba kuchikoro chepuraimari
 Kwete 70, Nanzheng Street, Dangyang Guta, Hubei Province
© Copyright 2020-2021 Fitdance ballet fekitori